Veloma Microsoft | Avy amin'ny Linux
Alf | | hafa
Efa ela aho no namaky ny fanehoan-kevitra "fankahalàna" tamin'i Microsoft sy Apple, samy nanome ny antony, -manana ny rafitr'izy ireo-, ary izany no hevitr'izy ireo ary izany no antony anajako azy.
Ho fanampin'izay, ny kofehin'ny Tina Toledo ary ny ahy dia ny mifamadika.
Tsy halako ireo orinasa ireo, mahatsapa fotsiny aho fa "maharikoriko" ny vokatr'izy ireo ary manana ny antony aho, taloha be dia mpankafy Microsoft aho, mpampiasa Excel efa ela, saingy ...
Indray mandeha simba ny solosainako, nisy namako nandeha nanamboatra azy io ary voatery nametraka indray, rehefa nametraka sy nampihetsika ny birao aho, nahazo ny fanambarana fa tsy tena izy io, mandefa mailaka hijerena raha mamaha ny olako ireo, rehefa Antso 2 sy mailaka 3 ny valiny farany dia: -Malahelo, nihoatra ny fetran'ny fametrahana azy io, ary raha te hampiasa ilay vokatra dia tsy maintsy mandoa vola vaovao ianao- queeeeeee? Mandoa indray? Azoko an-tsaina hoe misy olona mandoa isaky ny X vao afaka miditra ao an-tranony na afaka mampiasa ny fiarany, – Miala tsiny aho fa nosakanana ny varavarana, raha te hiditra indray ianao dia tsy maintsy mandoa licence vaovao–
Tamin'io andro io dia nampanantena ny tsy hampiasa ny vokatra Microsoft intsony aho, nozaraiko tamin'io fotoana io ity forum ity ary tena manenina aho fa tsy namonjy ireo mailaka nandefasan'ny serivisy fanampiana ahy?; ary andro vitsy lasa izay dia navaozina ny windows xp izay ananako amin'ny solosaina ary tsy niditra nandritra ny herintaona mahery izy ary tamin'ny naha-original azy dia tsy nesoriny, fa taorian'ny reboots maromaro, tamin'ny farany izay tsy nidirako intsony dia maty foana ny windows. Tokony hividy varavarankely indray ve aho? Tsia, mazava ho azy fa tsia, ary ny marina dia kamo aho mamerina mametraka ary hijery raha azo alefa ilay izy.
Izaho koa manana solosaina finday HP g4, ary aorian'ny pikantsary maromaro amin'ireto:
Nanapa-kevitra ny hanaisotra ny fikandrana tanteraka avy eo am-pofoako aho.
Saingy raha nampanantena ny tenako aho fa tsy hampiasa vokatra microsoft, ahoana no hialako amin'ny fandoavana ny lisansa windows rehefa mividy pc aho? Nahita olona hivarotra fitaovana amiko aho nefa tsy nametraka OS, ka nahazo acer maniry ny netbook D250 iray ary ny AMD Phenom pc X3 (apetrako amin'ny windows ny windows noho ny antony miasa) fa ny vidiny rehefa mividy azy ireo dia kely kokoa ny licence. Tsy maintsy hazavaiko fa tsy maintsy manao asa mandresy lahatra aho mba hamidin'izy ireo amiko ny fitaovana nefa tsy apetraka ny OS.
Eny, samy afaka manana ny antony ny tsirairay, ny sasany mety toa adala eo imason'ny sasany, fa ny tena vahaolana dia raha tsy tianao izany dia aza mividy azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Veloma ry Microsoft
Mampahafantatra ny tenako amin'ny zava-drehetra amin'ity lahatsoratra ity aho, izaho koa dia nijaly tamin'ireo toe-javatra ireo nanana ny fahazoan-dàlana am-boalohany ary soa ihany ary tsy nikasa ny hividy Samsung RV408 (satria mifandraika amin'ireo mitovy amin'izany dia ambany kokoa ny vidiny) ary rehefa tonga tany an-trano aho ary nitodika tamin'ny kaontiko no nanomezako azy…. Tsy nisy OS preloaded! avy hatrany ary tsy nieritreritra indroa nametraka Kubuntu 2 aho ary najanoko ny ahiahy momba ny korontana M $; Ao amin'ny netbook-ko (noho ny antony miasa) dia navelako ilay starter W $ izay avy amin'ny orinasa ary mieritreritra ny hanao dualitas miaraka amin'ny distro aho.
Olana marefo foana izy io, misy ireo izay tsy tia Windows noho ny asany, ny politikany ary amin'ny anao, ny serivisy mahatsiravina.
Izaho manokana dia tsy tiako tsotra izao satria nahavita tetika be dia be tamiko ary lafo vidy ... ny tiana holazaina dia hoe misy olona milaza fa mankahala an'i Windows fotsiny mba hiditra amin'ny tontolo Linux ary tsapako fa tena manao izany izy. Ireo mpampiasa Linux dia mahita anay mivantana ho mpankahala, tsy mitovy ny tena zava-misy.
Lahatsoratra mahaliana, arahabaina.
Jotaele dia hoy izy:
Ny olana amin'ny Microsoft sy Apple dia ny fomba itondrany ny mpampiasa. Hanombohana azy ireo dia raisin'izy ireo ho toy ny mpanjifa ianao fa tsy amin'ny maha-olona; izany hoe mametraka ny tombotsoany ara-toekarena mihoatra ny filàna sy ny zon'ny mpampiasa izy ireo. Misy fotoana iray izay miteny tsotra izao hatreto! Soa ihany fa misy Linux.
Mamaly an'i Jotaele
Lainga Mbola tsy nankany amin'ny AppStore ianao, marina?
Salama 3ndriago, manao ahoana ianao? Mamaly anao aho.
1. Inona no fantatrao momba ahy hitenenanao fa mbola tsy nandeha tany amin'ny AppStore aho.
2. Amin'ny alàlan'ny zon'iza no iantsoanao ny lainga malalaka sy hajaiko (toa anao).
3- Inona no ampahany amin'ny lazaiko fa lainga, ny fomba itondran'ny Microsoft sy ny Apple ny olona?
4- Ny fanontaniana dia tsy an'ny tena manokana, izany hoe ny fanontaniana napetraky ny lahatsoratr'i Alf dia tsy hoe efa tany amin'ny AppStore aho na tsia, na nampiasa Windows nandritra ny taona maro na tsia. Alf, avy amin'ny zavatra niainany manokana, dia milaza izay lazainy, ary izaho, avy amin'ny zavatra niainako manokana, dia milaza izay lazaiko. Tsy tiako ny Microsoft na Apple na ny mpampiasa azy. Mankasitraka fotsiny aho fa misy safidy toa an'i Linux, izay ihany.
5- Marina izany, zontsika ny tsy mividy izay tsy tiantsika, fa kosa maneho ny tsy fitovian-kevitra amin'ny raharaham-pirenena.
Mandehana any amin'ny AppStore dia ho fantatrao izay lazaiko. 🙂
Fanohanana ho an'ny mpanjifa tsara indrindra, rangahy!
Ary aza mahazo solifara, ralehilahy.
Izaho dia, ary eny, mazava ho azy fa tsara fitondran'ny AppleStores anao, izany no antony andoavan'izy ireo ny mpiasa nefa… Nahita ny vidiny ve ianao? Amiko ny fitondran'izy ireo tsara ahy ao amin'ny magazay dia tsy milaza amiko na inona na inona momba ny orinasa satria tsy manaja ny fahafahako izy ireo ary tsy miraharaha ny hevitro amin'ny maha mpanjifa azy ireo ... Tian'izy ireo hividy ny vokatr'izy ireo fotsiny aho, toy ny orinasa rehetra. ...
Aza milaza an'izany bro tsy misy dikany izany, ny fomba itondrany anao any amin'ny magazay dia tsy misy ifandraisany amin'izany.
Ary inona no tsy maintsy atao? Hitanao ve izay nampanaovin'izy ireo sonia hahafahanao mampiasa iTunes? Na ny valan-javaboary atsimo aza dia naneso azy
Miaraka amin'ny vidin'ny Apple sy izay takian'izy ireo amin'ny fomba ratsy, mety ho ambonin'izany rehetra izany dia tsy hitondra anao tsara amin'ny AppStore izy ireo, izany no orinasan'izy ireo mivarotra endrika tsara, mivarotra sary tsara, mamorona mpanjifa.
Raha samy mandany ny volany amin'ny zavatra tadiaviny ny tsirairay
Eto amin'ity izao tontolo izao ity, tsy hoe rehefa manome zavatra mahafinaritra anao ny olona iray ary miresaka aminao mahafinaritra dia tsy midika izany fa ao an-tsainy dia tsy mieritreritra zavatra toy ny "Mangalatra aho."
Ny orinasa ankehitriny, noho izany, dia mifototra amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa mba hisaorany anao mihitsy satria manome vola $ 100 ho anao izy ireo amin'ny zavatra mendrika hatao $ 1
Mitondrà hatsaram-panahy sy fahakiviana handany zavatra izay tsy tsara indrindra na mety indrindra mieritreritra aho fa tsy azo antsoina hoe Fanohanana ho an'ny mpanjifa izany.
Ho fanohanana ireo vokatra efa novidinao ho fanampiana hianarana ny fomba hitantanana azy ireo dia tsara ny anaovany izany, fa amin'ny maha adidy (na mbola ratsy kokoa aza, ny tsy fanamarihana) ny fametrahana rindrambaiko fanampiny amin'izay apetrakao dia tena ratsy tokoa no ataon'izy ireo…. Ohatra kely iray: Bonjour.
Tsy izany ihany. 3ndriago dia lavo tamin'ny teknika ara-psikolojika an'ny mpiasan'ny AppStore, satria eny ry rahalahiko, mampiasa teknika ara-psikolojika izy ireo hitondrany anao toy ny adala ary hamidiny aminao izay tadiaviny.
Manaiky aho, vao nahita an'ity sary ity izay milaza azy rehetra!
Mampalahelo fa tsy ny olona mahita zavatra toy izany xD
hahahahaha hafatra ambony ambany ve ny toeran'ny gidro eo amin'ny sary?
Valiny tamin'i Raerpo
Nifanena taminy tao amin'ny facebook ihany koa aho ary tiako ity fanehoan-kevitra ity:
@Zlatko, any ianao no mandrehitra afo. Voalohany indrindra, mpampiasa GNU / Linux isan'andro aho, mamorona rindrambaiko ho an'ny GNU / Linux aho, ary indraindray tokony hofoanako ny fikorontanan'ny Linux kernel. Ary ataoko izany hivelomana.
Faharoa, fantatro ny atao hoe rindrambaiko maimaimpoana ary Copyleft (GNU GPL) dia TSY Fahafahana. Fahazoan-dàlana BSD (X11, MIT, sns) no hantsoiko hoe Malalaka.
Fahatelo, halako (HATE) Apple.
Ka avelao aho hanazava ny antony tokony hanabeazanao ny tenanao:
1) Ny siansa dia UNIX. Linux dia TSY Unix, ary Mac OS X dia. Windows dia misy sosona mifanentana UNIX (mifanaraka amin'ny Single UNIX Specification / POSIX).
2) X, KDE ary Gnome mihitsy no mikorontana. Azo antoka fa nanao asa lehibe i X, saingy tsy izany no tadiavin'ny ankamaroan'ny olona. Izany no antony nanoloana azy Wayland ankehitriny. Etsy ankilany, ny Microsoft sy ny Apple dia samy manana antontan-tsary. Indrindra Microsoft. Afaka taona maro vao hanohana ny Linux ny fiovan'ny sary (uhm, nVidia Optimus na iza na iza). Ary i Windows Longhorn no voalohany nijery ny birao haingam-pandeha haingana (dia ny tsena farany, ekeko eto)
3) Fa maninona no siansa i Mono, fa .NET kosa tsy izany? Fantatrao ve fa ny Mono dia fanandramana hampihatra ny Microsoft .NET CLI / CLR amin'ny Linux, sa tsy izany? Mety hamaky ny sasany amin'i Miguel de Icaza ianao (fantatrao hoe iza izy, marina?) Fampahalalana farany momba ny tetikasa Mono.
4) Raha nanao asa matotra ianao, dia ho nankafizinao ny 20+ taona nifaneraserana API sy ABI tao amin'ny ekosistema MS, ary ny fampifanarahana POSIX / SUS an'ny OS X.
Azoko atao ny manohy mandritra ny ora maro, raha tianao, fa aleoko ianareo namana, mampianara aloha ny tenanareo.
Noho io karazana fanehoan-kevitra io - ary avy amin'ny olona - Voasakana ny $ $ hitako:
~ $ cat / sns / mpampiantrano
# / etc / mpampiantrano: latabatra fijerena statika ho an'ny anaran'ny mpampiantrano
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost heybeavis
"Ny korontana ateraky ny kernel Linux"
Tsy nantsoiko hoe korontana marina ny kernel Linux, eny goavambe, goavambe izy io, nefa raha jerena dia azony atao_ ary rehefa nanomboka ny fivoarany dia tsy nisy ny fomba fijery ananantsika ankehitriny momba ny informatika na koa zavatra iray akory. hahavoa be izany amiko, toa tsara ny asa nataon'izy ireo.
«Faharoa, fantatro ny atao hoe rindrambaiko maimaimpoana ary Copyleft (GNU GPL) dia TSY Fahafahana. Ny fahazoan-dàlana BSD (X11, MIT, sns) no antsoiko hoe Free. »
Tsy izany ve ianao, scumbag vendrana.
Ny GPL dia tsy manome ny fahalalahana faratampony sy farany ho an'ny fampandrosoana lozisialy fa manampy koa rafitra fiarovana izay tsy ananan'ny fahazoan-dàlana BSD: hanao izay fivoarana rehetra amin'ny ho avy izay manana lisansa GPL _ mbola malalaka_.
Mifanohitra amin'izany, ny fahazoan-dàlana BSD dia tsy "maimaim-poana" amin'ny hevitry ny "fiandrianam-pirenena" fa amin'ny hevitry ny "debauchery": ny olona rehetra dia afaka mandray ny lozisialy nahazo alalana tamin'ity lisansa ity ary manao izay tiany hatao nefa tsy voatery mizara ny fivoarany amin'ny ho avy. amin'io fahazoan-dàlana io miaraka amin'ny fiarahamonina.
Mazava ho azy fa ny lohahevitra nandefa ny hevitra nosoratanao dia mahatsapa ny fiantohana ny fahalalahan'ny GPL amin'ny ho avy ho fameperana, ho an'ireo izay mihevitra toa azy fa misy ny lic. BSD.
"Misafotofoto ny X, KDE ary ny Gnome"
Fa maninona ity bandy mahia ity, inona no resahina!?
GNOME3 dia birao vaovao tanteraka, ny vaovao indrindra amin'ny birao lehibe, nosoratana indray avy eo am-boalohany miaraka amin'ny fahitana ankehitriny momba ny fanaovana computing sy ny eritreritra ho avy, heveriko fa tsy misy tetikasa madio kokoa noho ity.
Ny KDE, na dia efa ela talohan'ny GNOME3 aza, dia noforonina tamin'ny fahatsapana fahalemena sy fampifanarahana amin'ireo teknolojia vaovao izay ampiasain'ny GNOME3 ankehitriny, raha ny marina, tamin'ny fivorian'ny fivorian'ny KDE farany teo tany Suisse, ny torolàlana voalohany dia napetraka ho an'ny fifindra-monina ho avy amin'ny rafitra vaovao. Qt5 sy QML, zavatra iray izay tsy ho vita mihitsy raha toa ka tsy tsara toa azy ny firafitry ny modely falehan'ny KDE.
Mitaraina momba ny X ny olon-drehetra fa mila mahatakatra zavatra roa ianao:
1. X dia fampifanarahana ny rafitry ny varavarankely Unix tany am-boalohany ary toy izany no mandova ny fetran'ny fetrany, ny tena lehibe dia ny tsy Linux i Linux fa rafitra iray mitovy - ary amin'ny fahalalako azy tsara kokoa, satria maoderina kokoa izy io. amin'ny toeran'ny solosaina maoderina.
2. Mavesatra ny X, miadana izy, bla bla bla, fa ny tsy fantatry ny 99% amin'ireo olona mampiasa GNU / Linux dia mpizara sary feno iray mamela anao hanao MAGIC: manomboka amin'ny fanokafana birao maromaro ao amin'ny miaraka amin'izay (ohatra ny GNOME amin'ny: 0, KDE amin'ny: 1, sns.) hasya avelany hanana rafitra ThinClients raha mbola matanjaka ny masinin'ny mpizara. Ahoana ny fomba hiresahana amin'ny dope ity @ Zlatko.
Wayland dia marina fa mampanantena izy fa hanova ny fomba fampiasantsika ny interface graphique, saingy mbola tsy ampy betsaka, betsaka, amin'ny tenin'i Shuttelworth dia tsy latsaky ny 5 taona alohan'ny hampiasantsika azy ho rafitra miorina amin'ny birao birao ary, miaraka amin'izany sy Amin'ny ankapobeny, ny fampiharana voarohirohy miaraka amin'ny fanohanan'ny X dia hitohy ny maro an'isa.
Araka ny fanadihadiana tsy miankina sasany dia mino fa mbola ho manodidina ny 20 taona mahery i X.
Ka izao indray: akombony ny vavanao Zalkto.
«Etsy ankilany, ny Microsoft sy ny Apple dia samy manana antontan-tsary. Indrindra Microsoft. Afaka taona maro vao hanohana ny Linux ny fiovan'ny sary (uhm, nVidia Optimus na iza na iza). Ary i Windows Longhorn no voalohany nijery ny birao haingam-pandeha haingana (dia ny tsena farany, ekeko eto) »
Tsy afaka miresaka momba ny Apple stack aho satria tsy fantatro izany, saingy mieritreritra aho fa ho novaina be dia be X hamaly ny filanao.
Windows minono, inona no resahin'ity lehilahy ity?
Ho an'ireo izay tsy mahalala: ny fikandrana sary an-tsary an'ny Windows dia ampahany tsy mitongilana amin'ny voany, izany no mahatonga ny lozam-pifamoivoizana nianjera ilay milina!
Tsy izany ihany fa: Microsoft dia nanisy taona sy nampifangaro ny teknolojia nantsoin'izy ireo hoe Direct3D (izay novidin'izy ireo niaraka tamin'ny orinasa namolavola azy manodidina ny 2000) ary miaraka amin'izany sy ireo fari-pitsipika Steam farany farany misy Left 4 Dead ao amin'ny GNU / Linux Ubuntu CRUSH ny fahombiazan'ny lalao mitovy amin'ny Windows, izay manatsara azy araka izay tratrany. Ndeha ho tadidintsika ihany koa fa ireo mpamily sary an-tsokosoko an'ny Windows dia miasa amin'ny fomba miharo kokoa noho ny amin'ny GNU / Linux.
Ka ario indray ny cul_ Zlaptko na izay anaranao.
"Fantatrao ve fa ny Mono dia fanandramana hampihatra Microsoft .NET CLI / CLR amin'ny Linux, sa tsy izany?"
Manaiky aho fa ilay bandy mahia nanao sary dia nametraka an'i Mono nefa tsy fantany hoe inona ny afobe, satria tsy maintsy naheno azy tany ho any izy ...
Ny Mono SUCKS, toy izany ihany, sahala amin'ny .NET, andiana "teknolojia" mifatotra miaraka amin'ny tsiranoka mba hanao programer _Visual Basic_ (hahahaha, mpandrindra, avia!) Afaka mampiasa sy miditra amin'ireo loharano mety tsy ho vitan'izy ireo raha tsy izany. .
Soa ihany fa efa ho faty i Mono, ny ankamaroan'ny distros dia nanala azy tamin'ny fametrahana azy ireo (Ubuntu no ohatra tsara indrindra) ary andao hatrehana izany: raha tsy misy ny fanohanan'ny distros toa an'i Ubuntu, openSUSE na Fedora, tsy manana ho avy i Mono afa-tsy ho Microsoft mialoha amin'ny sehatry ny F / LOSS ho an'ny akany voafetra be.
«4) Raha nanao asa matotra ianao, dia ho nankafizinao ny 20+ taona nifanarahan'ny API sy ny ABI tao amin'ny ekosistema MS, ary ny fampifanarahana POSIX / SUS an'ny OS X»
Izay no antony tsy ela akory izay dia nisy tabataba * be teo amin'ny tambajotranà mpanangana Microsoft satria ny interface Metro vaovao dia tsy ny endrika ivelany ihany fa ny momba ny fandaharana koa, ka izay rehetra nianaranao hatrizay dia ho lasa traikefa fotsiny. fa tsy maintsy mianatra ireo API sy fotokevitra Metro vaovao izy ireo mba hamoronana rindranasa xD vaovao
Apple dia tsy mifanaraka amin'ny POSIX ihany koa, ny kernelnya dia fork an'i Darwin ka TSY UNIX, ka indray Zlaptko na izay anaranao dia esory =)
«Afaka mandeha mandritra ny ora maro aho, raha tianao izany, fa aleoko ianareo namana, mampianara aloha ny tenanareo.»
Te-ho hitako izay holazainao, na dia mifototra amin'ny nolazainao hatreto aza dia azo antoka fa antontam-poana ny hadalana.
Ny zavatra ratsy indrindra dia tsy izy no diso, izy no iharam-boina ary vokatry ny asa ratsy fanaovan-gazety sy ny FUD izay avy amin'ity lafiny ity ihany.
Na dia manana ny tanjony aza ny "voninkazo" manohitra ny KDE, heveriko fa ao anatin'io vondrona io no izy no malefaka kokoa, satria manohitra ny ambiny izay nitorian'izy ireo azy dia mihintsy ary izay rehetra avy amin'io lafiny io ihany.
Mazava ho azy fa mieritreritra aho fa ireo fanafihana rehetra natao hamelezana ireo zavatra ireo dia tsy ara-drariny, mba tsy hialana lavitra izao ny fanafihana an'i X dia ny fivarotana antsika zavatra izay tsy fantatsika akory ny momba azy, fa satria ny zava-baovao «tsy maintsy ataonao fiara fitateram-bahoaka ho any amin'ny onja ary hametraka ny FUD amin'ny zavatra taloha mba hampisehoana fa nampahafantarina antsika ».
Ny tsy fahombiazan'ny antiGPL sy ny proBSD dia zavatra iray izay manomboka be koa amin'ity lafiny ity, nomen'ny orinasa izay mihinana miaraka amin'i Opensource sy ireo mpankafy azy.
Na izany na tsy izany, raha amidintsika izany dia novidiny isika.
ny benchmarks Steam farany misy miaraka amin'ny Left 4 Dead ao amin'ny GNU / Linux Ubuntu CRUSH ny fahombiazan'ny lalao mitovy amin'ny Windows, izay ahitam-bokatra araka izay tratrany.
Ralehilahy, tsy azo porofomina na inona na inona izany fa ny dokambarotra Valve fotsiny no mivarotra antsika sy mamorona hype ary tsy nanome porofo akory izy ireo, ny teniny ihany.
Apple dia tsy mifanaraka amin'ny POSIX ihany koa, ny voany dia fork an'i Darwin ka TSY UNIX,
TOA aho fa manana mari-pahaizana UNIX ny MacOSX, ny ambiny dia afaka milaza faobe.
Faly be aho izao! Farany aho mahalala (mamaky) olona mahatakatra ny fomba fijeriko! Tonga eo amin'io fehezan-teny io daholo: "raha tsy tianao dia aza mividy azy"
Lele! Fa maninona no lasa be pitsiny ny olona?! Ary raha ny marina dia nahatezitra ahy izany, raha mitsikera ny WordPress izy ireo dia miafara amin'ny fiampangana an'i MS sy Apple. Raha miresaka Photoshop vs Gimp izy ireo dia miampanga an'i MS sy Apple amin'ny farany. Raha voaravan'ny taratasy fidiovana izy ireo dia azo antoka fa MS na Apple no mamorona azy !!!
Toa ny zavatra sarotra amin'ny fiainana no tsy manapa-kevitra izay tianao, fa ny mahatakatra fa izay tianao dia tsy voatery hoe ny tsara indrindra ho an'ny olon-kafa. Vahaolana, satria ilay efa nilaza: "raha tsy tianao dia aza mividy azy"
Efa nanambara an'ity indray mandeha ity aho tao amin'ity bilaogy ity, saingy heveriko fa mendrika ny averimberina: Ao amin'ny asako dia misy milina CNC roa, tombanana tombana 3/4 tapitrisa dolara eo anelanelan'ny roa. Ny rindrambaiko ilaina hamoronana programa dia fananana, 25k ny lisansa ary gaga! Windows ihany no misy azy io. Ohatrinona no vokarin'ireto milina ireto isan-taona? Manodidina ny 2 tapitrisa ... Misy olona azafady, mivoaha calculatera ary manaova ny matematika, mendrika ve ny mandoa ny licences sa tsia?
Tena marina, miala tsiny amin'ny fidirana an-tsehatra fa "raha tsy tianao dia aza vakiana" ... Tsotra izany, ny fanehoana hevitra dia tsy hoe tonga ny smartassa ary mifanohitra amintsika fa tsotra fotsiny mba hahazoan'ny olona mitovy fomba fijery amintsika na mitovy aminy manehoa ny tenanao… Olombelona tia fiaraha-monina izahay… azoko tsara ny fomba fijerinao, mila Windows ianao ary mbola manontany anao aho, tianao ve i Windows?; Eny, na dia io aza ny rindrambaiko tsara indrindra ary maro amintsika no tsy tia an'izany na inona na inona antony ary tsy izany no antony hahafatesany na hijanonany ho Windows. Tsy manankarena aho ka lafo ny Microsoft taloha, nijanona tsy nividy akanjo aho hanamboarana lesoka amin'ny endrika ary tsy faly aho, fa ianao miaraka amin'ireo an-tapitrisany maro kosa manana ny tsirony na ny mety ho azonao. Apple dia manome serivisy tsara ho an'ireo izay afaka mandoa izany isaky ny maniry izany izy ireo. Ary ny tapakila? Fotoana fotoanan'ny krizy izay misy mpahay siansa mahantra (toa ahy) manana Linux satria maimaim-poana izany ary hangalatra Wifi amin'ny sakaizany akaiky izy (azafady, Martha XD) hahafahany miasa nefa tsy very mihoatra ny karamany ... fa misy tokoa ny tsena amin'ny zava-drehetra.
Fantatrao fa efa programmer roa izahay nefa tsy manam-bola xD
Hahahaha, tsy manahy izany, ny sarobidy tsy manan-tsahala amin'ny lafo ... Linux sarobidy izay manokatra ny sainao hahalala bebe kokoa, lafo ho anao ny manidy ny tenanao amin'ny fahazoan-dàlana iray izay itondran'ny hafa anao araka ny sitrapony.
Mpianatra fotsiny aho, 17 taona. Fa maninona no mandoa fahazoan-dàlana lafo vidy? Ho an'ny lalao? Na dia izany fiainana izany dia tsy izany; Birao inona? Tsy mila izany aho satria miasa manamboatra PC bebe kokoa noho ny manoratra antontan-taratasin'ny governemanta. Inona ny programa X izay mandeha amin'ny Windows fotsiny? Ho an'izay misy safidy hafa ary akoho tsara ao amin'ny tokontany rehetra no mihira. Ny tiako holazaina, Nano, tsy mahita ny tenako aho mba hamahana an'ireny tompokolahy manankarena ireny rehefa mila mihinana mihoatra noho izy ireo aho (milanja 100 lbs!), Ny fahazoan-dàlana ara-pananana dia tsy manaja ahy. Tsy handeha lalina loatra, araka izany, ny sasany hilaza fa mihoa-pefy aho, saingy tsy mino, tsy firaisana tsikombakomba izany, zava-misy novonoin'ny piraty.
Andao jerena ny namako, mpiasa tsotra aho fa tsy tompon'ny orinasa, ka lehibe loatra amiko ilay milioney (indrisy) XD
Niezaka ny hizara aminareo fotsiny aho. fomba fijery hafa.
Araka ny nolazainao dia samy mamoaka izay tadiaviny ny mpanoratra tsirairay ary zony izany, saingy satria misy ny sehatra fanehoan-kevitra, satria samy maneho izay tadiaviny ihany koa ny tsirairay, sa tsy izany?
Miarahaba ary azafady, kely kokoa ny kafeinina huh? 😉
Fa iza kosa no nilaza fa tsy mamokatra na tsy mamokatra vola? Tsy izany ny teboka eto, ary koa tsy misy miady amin'ny zavatra rehetra lazainao, hoy i Alf fa tsy tiany izy, tsy mividy azy izy, nilaza aho fa tsy tiako ary tsy ampiasaiko koa, ary Jotaele dia misaotra fa misy safidy hafa ho an'ireo izay tsy te hampiasa azy ireo izy ireo… Te hamorona lelafo amin'ny fomba fijeriko ianao ary tsy hitako fa ilaina izany eto, satria tsy lelafo ity lohahevitra ity.
Mikasika ny fahazoan-dàlana sy ny tombom-barotra ary izay rehetra tadiavinao, ok, tonga lafatra, mahazo vola izy ireo, saingy misy ihany koa ny ohatra amin'ny famokarana rindrambaiko malalaka tombony be (Red Hat, Suse?) ...
Manaiky tanteraka! Raha ny marina dia nomeko ohatra ny toerana iasako hanamarinana izay voalaza: raha tsy tianao izany dia aza mividy. Raha amin'ny lafiny iray hafa dia mahasoa dia vidio! Raha tsy misy adihevitra mihitsy, fahamarinana lehibe ve izy io amin'ny maha-tranobe azy!
Tsy misy foana ny safidy TSY mividy namana.
Fivarotana inona no azonao aleha ary rehefa mividy solosaina ianao dia lazao hoe: «Tsy tiako ny hanana Windows, ahenao ny $ 50 ho an'ny Windows satria tsy tiako izany?
Fa afaka mividy kit ianao ary manaingo azy io !!!
Eny, mazava ho azy, misy foana ny safidy amin'ny fividianana ny tabilao, ny CPU sy ny RAM, ny fividianana ny chassis sy ny singa hafa, alohan'ity firaketana ity ny tenanao sy ny fanananao hevitra farafaharatsiny momba ny fitaovana, hiantohana ny fifanarahana sy ny toy izany.
Fa ianao, izaho, ary ny maro hafa izay mamaky ity dia mahay manao an'izany ... fa, ny mpampiasa antonony (izay tena te hiaro ny maro haha), dia tsy manana NPI amin'ny fomba fanaovana an'io.
enae dia hoy izy:
MBOLA MAMELA LICENSES MICROPOF marina ve ianao?
Mamaly an'i enae
Na hafahafa aza ny fahitana azy dia io no zavatra mety tokony hatao.
Ny fampandrosoana rehetra dia misy vidiny mifandraika amin'izany ka tsy hitako ny antony tokony hanafahana an-keriny, ankoatran'ny hoe amidy na manana fahazoan-dàlana ny vokatra ary nataonay piraty izany dia tsy mety izany, mangalatra tsotra izao isika.
Ny olana dia mikomy ny olona iray matetika handoavana ny fahazoan-dàlana satria:
1. Lafo be izy ireo raha oharina amin'ny tombontsoa omeny anay sy ny fameperana apetrany aminay (azo ampiharina amin'ny rindrambaiko na mozika na fampidinana sarimihetsika ara-dalàna izay mbola lafo mifandraika amin'ny vokatra)
2. Hitanay fa tsy azo atao ny mampifandray ny "licence" + "pay" + "Microsoft" noho ny leo amin'ny rindrambaiko antonony.
Toy izany koa, na manao ahoana na firy ny fikomianay, na tsy tiantsika aza ny fomba fanaon'izy ireo na ny vokatra vokariny - raha resaka teknika dia mangalatra ny piraty.
Ankehitriny, raha raisintsika ny fomba fanao maharikoriko izay ananan'ny orinasa sasany toa an'i Microsoft, manala ny fifaninanana mamokatra vokatra tsaratsara kokoa noho izy ireo, manome kolikoly ireo tompon'andraikitra mba hametraka ny vokariny any amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana ary ao anatin'izany ny any ambadiky ny rafitra fiasan'izy ireo, ny piraty dia azo atao endrika fikomiana sy hetsi-panoherana ary hipetraka amin'ny faritra volondavenona izay tena sarotra faritana (raha ratsy ianao, izaho no ratsy kokoa).
Miaraka amin'izany ary izay rehetra ataon'ny sasany zavatra tsy mety dia tsy manamarina fa manao izany koa isika ... na dia niverina aza isika, raha babon'ny orinasa tadiavin'ny rehetra isika dia ny manala ny zontsika rehetra amin'ny maha-mpampiasa antsika sy ny mpanjifa ary amin'ny vidiny ratsy amin'ny alàlan'ny fametrahana ampihimamba, avy eo ny hany sisa tavela dia ny miady amin'ny fitaovany manokana ary mampiasa ny fihetsik'izy ireo manoloana ny sisa amin'ireo orinasa ary manohitra antsika manohitra ny tenany.
Imbetsaka dia tsy mora ny manapa-kevitra ary manondro ny rantsantanana dia mora be.
Eny, satria na dia orinasa tsy tiako aza i Microsoft dia tsy manohana ny fanaovana piraty aho ary manalavitra azy hatramin'ny farany, izany no tsy ananako varavarankely amin'ny solosaiko, satria tsy piraty aho, mpamorona aho ary izany no antony ahafantarako izay vidiny. manaova zavatra ary maharary ny mangalatra amin'ireo mpamorona hafa.
Na dia an'arivony tapitrisa aza ny sasany mihomehy ny fahantran'ny sasany ... Tsara ianao ry Nano! ... Marina izany, napetrany tao am-ponja izahay noho ny fanapahana ary te-hamono anay noho ny tsy fampiasana ny vokatr'izy ireo (tsy ara-bakiteny) ...
Toa rariny sy manan-tsaina izany amiko. Raha ny marina dia tiako ilay filozofia, raha manana azy ianao ary mila azy dia mandoa. Raha tsy izany dia mitadiava fomba hafa. Manantena aho fa hieritreritra izany ny rehetra!
Ary inona no hataontsika raha tsy zakantsika izany ary tsy ny tena izy no solony? Milaza aho fa sarotra soloina ny AutoCAD, miaraka amin'ny LibreCAD na NanoCAD dia tsy mahomby ianao, saingy tsy izany, tsy zaza iray no hividy izany fahazoan-dàlana izany hisarihana ... Na izany aza, inona no hataontsika?
Eny, tsy haiko 🙁
Fa tena heveriko fa raha hampiasa zavatra ara-barotra ianao dia tokony aloanao amin'ny mpanoratra ny zavatra angatahiny.
Rehefa miasa amin'ny orinasa ianao dia mividy fahazoan-dàlana voalohany ilay orinasa, rehefa mividy solosaina finday ianao dia miaraka amina Windows napetraka ary tafiditra ao anatin'ny vidiny ilay lisansa. (raha tsy mividy solosaina finday miaraka amin'ny FreeDOS)
Tsy maintsy nandoa licence starter w7 aho (izay tsy avelako hanova ny wallpaper) satria ilay laptop mora vidy indrindra azoko dia niaraka tamin'izay, very vola tamin'ny fahazoan-dàlana aho satria tsy mampiasa windows fa tsy nanana safidy tsara kokoa.
Tsara, hahaha. Ny sipa manana asus eee pc ary indray andro dia nilaza tamiko izy hanova ny sary an-tsaina izay tsy azony ary noheveriko ho sangisangy izany. Raha ny marina, raha vao niditra tao amin'ny tongolo lay aho dia toa tsy nampoizina ny fiasa ary noheveriko fa efa nampidirina ny fampiasa, satria napetrako tamin'ny rantsan-tànana izay tokony tsy tokony tamin'ny fotoana hafa (toy ny amin'ny windows, mamela anao hanao izay tianao ianao nefa tsy mitaky alalana be loatra. ), satria zavatra ambany dia ambany io ka tsy tokony hosakanana.
Amin'ny farany dia heveriko fa nisy programa napetraka hanaovana azy, zavatra toa matanjaka be amiko, nefa, ny tiana hambara dia izao hitako aminao izao fa tsy tafiditra ao ilay fiasa. haha.
Aiza no hijanonantsika!
Mampatsiahy ahy lahatsoratra iray tena nahaliana novakiako taloha kelin'izay:
PS: 100% tsy misy vokatra M $ mihoatra ny 6 taona… 🙂
Tsy mampiasa windows aho satria tsy tiako, satria ny zavatra rehetra tokony hataoko dia efa vitan'ny linux, ankoatry ny maimaim-poana sy maimaim-poana, maninona no mampiasa windows na mac? koa ny Linux dia mahaliana kokoa ary raha mampiseho aminao ny fomba fiasan'ny rafitra miasa (satria afaka mahita kaody sns ...) dia ny hevitro manokana.
Eto amin'ity firenena ity (Honduras) mbola tsy nahita kopian'ny lozisialy fananana ara-dalàna aho, ary mitaky ny fanerena ahy hampiasa triatra, hanao fanovana mampidi-doza amin'ny rafitra kaody mihidy, ary ny tsy fanarahan-dalàna hafa.
Vao tsy ela akory izay dia nomen-dry zareo laptop aho ary niaraka tamin'ny windows 7 izy io, indrisy fa tsy naharitra adiny 2 io raha efa nanana rakitra 😀 aho
Marina ny naoty, tsy mankahala ireo mpampiasa Apple na Microsoft ianao, na orinasa, mahatsiaro ho voahilikilika fotsiny ianao noho ny vokatr'izy ireo sy ny fomba fiasan'izy ireo manararaotra. Fantatro fa misy rindrambaiko manokana izay nanambola vola hamokarana azy io ary mandeha amin'ny varavarankely fotsiny izy io, saingy, ho an'ireo manampahaizana manokana, milaza, famolavolana na inona no fantatro, ho ahy, mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo tsotra momba ny injeniera amin'ny rafitry ny solosaina, linux dia Mihoatra noho ny ampy, fa tsy izany loatra ho an'ny mpamorona na ilay miasa amin'ny masinin'ilay tsy haiko hoe ohatrinona ny tapitrisa xDDD.
Ny tena marina, Apple na Microsoft dia tsy mila mahafantatra hoe aiza no Honduras XD (vazivazy ratsy).
Fa hey, ny olona rehetra manana ny fomba fijeriny ary miombon-kevitra betsaka amin'i Helena aho. Ny marina dia tsy malalaka, fa afaka. Afaho ny fahalalana azo ary afaho ny mpampiasa hianatra. Lalànan'ny rindrambaiko maimaimpoana sa tsia?
Tsia, tsia, toa tsy dia ratsy loatra tamiko ilay vazivazy, raha tadidintsika fa vao tsy ela akory izay dia nisy tompon'andraikitra gringo iray nivoaka nilaza fa te hiteny "latin" izy mba hanana fotoana hifandraisana tsara amin'ny vahoaka amerikanina latina. O_o '!
Ka ny vazivazy dia tsy ratsy, fa taratry ny zava-misy tena mahatsiravina
Tena ratsy? Haha misaotra ... Marina izany, maninona no mitomany raha afaka mihomehy vazivazy ratsy isika ... Ny marina dia «tsena» mitsingevana isika, izany hoe: Na mianatra miteny anglisy isika na mianatra mahatakatra ny Espaniôla ... Tsara ho an'io tompon'andraikitra io, trondro farany maniry milomano amin'ny rano mahafinaritra ...
Toa tsara daholo izany amiko. Fa firy no vonona handoa ny fahazoan-dàlana SUSE na RedHat?
Sa vonona hanome fanomezana ho an'ny distro ampiasainy izy ireo?
Taona maro lasa izay dia tsy nahita efijery manga an'ny Windows aho, mampatahotra izany. Tahaka ny fitsikeranay ny politikan'ilay orinasa voalaza io, dia tsy maintsy mankasitraka an'i Windows izay nanatona anay koa izahay ary nampianatra anay hampiasa solosaina, ary io Operating System io dia ampiasaina ho toy ny referansa manome lanja bebe kokoa ny Linux hajainay.
Ity no tantara tsy misy farany, fantatsika rehetra izany ary tsy misy azo atao, samy manana ny antony hampiasana distro Linux ny tsirairay, miara-miasa araka izay tratrany na farafaharatsiny tsy hitovizany amin'ny fomba fanaon'ny hafa azy ary ajanony ny fampiasana ny Social ny satan'ny olona mampiasa OS iray na hafa, fantatro ny olona ambony mampiasa Linux sy ny olona miasa mandany ny zava-drehetra hahazoana iPhone sy hisehoseho eo amin'ny manodidina azy, izany no zava-misy mampalahelo
Tsy fantatro na liana te hahalala ny fomba manoloana ny serivisin'i Apple eo imason'ny mpanjifany aho, ny tena marina dia tsy nahasarika ahy velively ity orinasa ity, saingy fantatro ny fomba Microsoft ary tokony holazaiko fa mahatsiravina izany, raha afaka manjono ianao Misy zavatra tsara kokoa fa tsy mahazo anao ny trondro, heveriko fa hevitra tsara kokoa izany. Nandritra ny taona maro dia niatrika ny Windows sy ny olany rehetra aho, windows xp tena marina ary io no kinovan'ny windows izay hajaiko noho ny faharetany, fa ny windows kosa dia zavatra halako ary mampiasa GNU / Linux eh sense aho. fofonaina fahalalahana izay tsy hoe tsy mila mividy satria minoa ahy fa nalaim-panahy hividy fonosana Red Hat Enterprise Linux aho saingy ny fahafantarana fa io kaody io dia azonao ampiasaina nefa tsy misy olana amin'ny fameperana, ny tena marina dia Ho an'ny maro, Microsoft dia nanao tombony lehibe tamin'ny fanamorana ny fampiasana ny solosain'izy ireo fa raha mieritreritra ianao fa manana ny serivisinao dia mandiso ianao dia mbola manana zavatra hafa ary tsy tsara toy ny virus pc tsara tarehy, ary koa tsy Heveriko fa handeha hividy ny rindrambaiko rehetra ianao hiarovana ny solosainao, izany dia noho ny etika izay ampiasain'ny olona iray amin'ny GNU / Linux, satria ny fahalalahan'ny mpampiasa no atahorana sy ny rafitra misy azy koa.
Faly aho tamin'ny fizarana ahy (Fedora) ary hatramin'ny nijanonako tsy nampiasa windows intsony dia lasa mora tamiko ny fiainana informatika ary nianatra bebe kokoa aho.
Ny famakiana ireo fanehoan-kevitra dia mila milaza ny marina aho, tsy mampiasa Linux noho ny filozofia, tsy miraharaha (tsy misy fanafohezana) aho, ny zava-dehibe amiko dia ny fahombiazan'ny solosaina findainy, an'ny pc ny zanako vavy ary ny netbook ho an'ny vadiko.
Mandoa vola amin'ny redhat? Mazava ho azy fa, raha nandoa fahazoan-dàlana 1 Windows sy fahazoan-dàlana 1 Office aho, mazava ho azy fa handoa Linux iray aho, saingy mandraka androany dia i Ubuntu no mpanazatra ahy ary tsy nandiso ahy izany, fanomezana? Vita izany, tsy raharaha lehibe izy ireo satria tsy avelan'ny paosiko.
Fivarotana inona no azonao aleha ary rehefa mividy solosaina ianao dia lazao hoe: "Tsy tiako raha manana Windows izy, ahenao ny $ 50 ho an'ny Windows satria tsy tiako izany? -
Manaiky aho fa tsy misy foana ny safidy tsy mividy, Ela aho vao nahita olona hivarotra fitaovana amiko raha tsy napetraka ny OS, indrindra ny netbook, miaraka amin'ny pc dia sarotra kokoa izany, saingy miaraka amin'ny faharesen-dahatra sasany namidiny tamiko, 1 taona lasa izay dia tsy handeha aho, fa ny namako kosa mbola manohy mivarotra fitaovana; Nahita an'ity olona ity aho taorian'ny nitsidihako saika (azoko antoka izany) ny fivarotana rehetra mivarotra kojakoja amin'ny solosaina, ary novidiko aloha ny pc, ary ny netbook 5 volana taty aoriana.
«… Tsy mampiasa Linux amin'ny filozofia aho, tsy miraharaha (tsy misy fanafohezana), ny zava-dehibe amiko dia ny fahombiazan'ny solosaina findainy…»
Alf, tsy te-hitsikera anao aho noho ireo teny etsy ambony na miady hevitra aminao, fa milaza izany aho satria heveriko fa zava-dehibe izany. Heveriko fa tsy azonao atao ny manavaka ny Linux OS amin'ny "filozofia" Linux. Izany hoe, misy hevitra, soatoavina sasantsasany na, raha tianao ny "filozofia" izay ahafahana misy ny Linux ary toy izao, ary tratrako, ohatra, ny fahombiazan'ny laptop-nao. Raha tsy nisy izany filozofia izany dia tsy hisy i Linux. Iza, iza no liana amin'ny famoronana rafitra maimaim-poana, miaraka amin'ny soatoavin'ny vondrom-piarahamonina, raha tsy filozofia manome lanja an'io mihoatra ny tombontsoa ara-toekarenan'ireo orinasan-tserasera lehibe?
Raha ny tianao holazaina dia hoe tsy te hiditra amin'ny adihevitra ara-potokevitra ianao, na hoe, tsy noho ny antony ideolojika no misy anao ao amin'ny Linux, heveriko fa tsara izany. Saingy, heveriko fa raha mampiasa Linux aho, na tiako izany na tsia, dia mieritreritra "filozofia" aho. Izay tsy midika hoe lasa fanatisme aho izay mankahala ireo izay tsy mieritreritra ahy, na mankahala ny rafitra fiasa hafa.
Jotaele azoko ny hevitrao, ary sahala amin'ny doka fahitalavitra nilaza, avelao aho hitsako azy.
Jazz dia hoy izy:
Niala tamin'ny nantsoina hoe "avy amin'ny Linux" ka hatramin'ny "Linux ho an'ny Taliban" ity bilaogy ity ... Malalaka be ny tsena ary mitombina daholo ny rindrambaiko soloina rehetra. Tiako ny Debianako ary io no ampiasaiko isan'andro hiasa. Fa manana ny vokatra Apple ihany koa aho ary afa-po amin'ny fanandramana natolotry ny mpampiasa, ny serivisy teknika dia mendrika ny vola aloanao amin'ny vokatra.
Fa ankoatr'izay, inona no olana raha mivarotra ny fahazoan-dàlana lafo vidy aminy ny orinasa na manana maodely tompony amin'ny vokariny? Ny fomba fanaovany raharaham-barotra sy fivelomana, raha mividy zavatra ny olona dia ho an'ny zavatra iray. Manana safidy hafa maimaimpoana ho an'ny rindrambaiko karama rehetra izahay, ary miaraka amina kalitao izay tsy hialona ny mpifaninana aminy. Izaho manokana dia manana libreoffice napetraka ao amin'ny iMac satria mahafeno tanteraka ny filako mihoatra ny suite Apple.
Ankehitriny, raha misy manam-bola handany azy io handoavana lisansa telo-polo samy hafa ary handefa rindrambaiko maimaimpoana, olan'izy ireo izany, mandany ny volany araka izay tiany ny tsirairay ary tsy izany no antony kely na mihoatra noho isika izay manapa-kevitra hampiasa vokatra hafa. Ity dia adihevitra tsy mitongilana izay tsy mitondra mankaiza satria ny safidy iray na ny hafa dia tsy hiova mandritra ny lahatsoratra telo na efatra manafika an'i MS na Apple. Tsy tompon'ny fahamarinana tanteraka isika ary ny fanilihana ny hafa dia tsy manome antsika rariny intsony. Raha ny fiheverako ny fanetren-tena dia misy zavatra maro azo resahina eto amin'ny tontolon'ny Linux nefa tsy mamerina lahatsoratra sy lahatsoratra isaky ny inona ny haratsian'ny orinasa manao ampihimamba ny tsena.
Mamaly an'i Jazz
Betsaka ny zavatra azo resahina eto amin'ny tontolon'ny Linux nefa tsy averimberinao intsony ny lahatsoratra manaraka ny haben'ny haratsin'ireo orinasa manao ampihimamba ny tsena
Izany indrindra no ezahiny atao.
Satria ny Linux dia tsy tranonkala iray izay mpampiasa iray ihany no mamoaka, na roa, dia tsy elav ary izaho irery no nanangana ilay tranonkala fa izahay ihany no manoratra.
Ny tenako dia manandrana manome fampianarana mihoatra ny zava-drehetra, satria tsikaritro fa ilaina ny tutorial tsara amin'ny tambajotra, miezaka ny mizara ny zavatra niainany na ny fomba fijeriny ireo mpampiasa hafa 🙂
Microsoft dia tsy ratsy "ilaina" velively, fa Ratsy tsotra izao (manery, mametra, manao ampihimamba, manararaotra, mihoa-pefy noho ny fako, manaratsy ary manafika ireo izay nitazona azy ireo ary nanankarena azy ireo nandritra ny 36 taona). Avelao ho lo i Gates sy i Ballmer. Amena.
Ary maharary fa faharatsiana izay notohizan'ny mpanjifa, efa fanaontsika ny orinasa rehetra na inona na inona karazana fa handoa izay vidiny hampiasana ny vokatr'izy ireo izahay, tsy maninona fa ny zavatra rehetra dia mety ho mora vidy kokoa.
hunabku dia hoy izy:
Ho ahy, ao anatin'ireo zava-tsarotra nahatonga ahy naharitra ela ny fianarana momba ny gnu / linux, dia hitan'izy ireo fa tsy nampianarin'izy ireo tany am-pianarana mihitsy aho hoe misy zavatra hafa ankoatry ny windows, fantatro fa nisy ny paoma nefa tsy nampianatra ahy mihitsy izy ireo na inona na inona momba ny fikirakirana ny rafitra macos ary mieritreritra aho fa izany no iray amin'ireo olana manasarotra ny rafitra gnu / linux ho an'ireo mpampiasa farany, ny fisian'ny rafitra windows ao amin'ny sekoly rehetra ary izany no ampianariny anao. Tsy fantatro izay toerana ampianaran'izy ireo anao amin'ny linux distro amin'ny fanabeazana fototra (na ny minix na ny bsd koa aza unix) izay tsy dia fahita firy. fa ny tsirairay dia mampiasa ny rafitra mifanaraka aminy indrindra fa farafaharatsiny ny safidy tsy tokony hoferana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny rafitra fandidiana 2 fotsiny. Ny ubuntu sy ny linux mint dia tena mora ampiasaina (raha ny fahitako azy mihoatra noho ny windows na macos). rindrambaiko maimaimpoana dia hatsarana izay tokony ho fantatry ny tsirairay tsy misy fitsarana an-tendrony fa mora ianarana na ampiasaina ny windos sy macos, izay lainga satria ireo rafitra miasa ireo dia mila mandany fotoana ihany koa hianarana ny fampiasana azy ireo.
Mamaly an'i hunabku
Dante696 dia hoy izy:
Any Mexico, raha te hividy solosaina finday tsy misy fahazoan-dàlana na rindrambaiko preloaded ianao, any raha amin'ny teny sinoa, satria matetika rehefa maneho hevitra ianao fa te-hametraka OS hafa noho ny Windows dia te-hanafoana ny antoka izy ireo avy hatrany. Raha ny momba ireo PC niangona dia tsy misy olana na fanelingelenana be loatra. Mampalahelo fa ny fivarotana anao ny solosainanao amin'ny alàlan'ny Windows sy Office efa voarindra, mazava ho azy fa manana lisansa OEM, dia mandrisika ny fampiasana an'ity rafitra ity ary tsy mitady fomba hafa vaovao ny olona. Manantena aho fa amin'ny fotoana sasany eto amin'ny fireneko dia hanana fiofanana bebe kokoa amin'ny rindrambaiko maimaimpoana isika, ao anatin'izany ireo andrim-pampianarana na ny governemanta mihitsy.
Mamaly an'i Dante696
Fantatrao tsara kokoa, tsy mitady sipa ianao na tsara kokoa aza, mandao ny efitranonao ianao ,,, azonao antoka fa tsy afaka matory miaraka amin'ny lahatsoranao ny ekipa Microsoft iray manontolo !!! Ary raha alf tamin'ny taona 80 ianao dia saka nohaninao !!!
Ary azonao atao ve ny mividy pcs tsy misy OS napetraka na mivantana miaraka amin'ny Linux napetraka? Tsy mahalala tranokala aho.
Tao amin'ny tanànako dia mbola tsy nahita azy ireo tsy nanana OS aho, fa nahita ny sasany niaraka tamin'i Canaima Linux (avy any Venezoela). Raha misy mivarotra azy, dia raharaha ny fikarohana tsara (na angamba fandresen-dahatra ny mpivarotra?)
Any Kolombia dia mahazo solosaina finday tsy misy OS efa voapetraka ianao ary koa raha manangana na mangataka ny hanaovana solosaina PC araka ny itiavanao azy ianao dia afaka misafidy izay OS hoentiny.
Eny, tsy halako ny Microsoft na ny Apple toa izany. Ary sahala amin'i Alf, ndao lazaina fotsiny fa tsy dia mampiasa Linux loatra aho noho ny filozofia fa ny fahombiazany
Manana eto Windows 7 sy Archlinux (PC desktop) aho, manana ny Android-ko ary nomen'izy ireo iPod Touch aho. Tsy afa-po? Tsia, omeko ny fampiasana sahaza azy fotsiny ny zavatra tsirairay.
Ary raha mila laptop misy fampisehoana tsara aho izay tsy misy OS. Raha mahazo aho dia ho faly
Hatramin'ny hiresahantsika ny antony dia haneho ny ahy aho.
Mampiasa rindrambaiko maimaim-poana aho nanomboka ny taona 2002, resaka te hahafanta-javatra kokoa noho ny zavatra hafa rehetra izany.
Toy ny mahazatra, nanana fizarana roa aho ary noho izany dia nandany taona vitsivitsy. Saingy nisy zavatra tsy maintsy nitranga izay hanova ny zava-drehetra, tsotsotra, tsikelikely aho dia nijanona tsy nampiasa Windows intsony ka tsy nampiasaiko intsony.
Tamin'izay aho no namolavola ny fizarazaran'i Windows tamin'ny farany, nesoriko ny solosaina finday, anisan'izany ny lisansy OEM. Dimy taona teo ho eo aho no toy izao ary tsy hadinoko izany.
hahaha Nanapa-kevitra ny hijanona tsy hampiasa windows intsony aho satria ny milina nataoko endrika endrika vao haingana ary voan'ny virus ao anatin'ny 5 min hehehe
Tsy noho ianao pitiñisquis, fa raha "mifanohitra amin'izany" amin'ireo tranga nolazainao (toa an'i Tina Toledo, sns.) Dia tokony ho tonga toa ny "reconverso" ianao ary koa manana ny dikany mifanohitra amin'izany, fa ny zavatra notantarainao ihany mety ho "niova fo" ianao (izay manana ny heviny mitovy) izay mbola ho eo amin'ny sehatry ny volan-tantely (ary toy ny olon-drehetra) mieritreritra fa haharitra mandrakizay izany ary tsy hisy na inona na inona hampiala anao eo.
Ny fotoana ihany no hilazana raha miverina miova ianao ary raha mitranga izany dia hanana làlana mitovy amin'izany (tsy ny mifanohitra amin'izany).
1. Salami matihanina ity lehilahy ity, tsy lasibatry ny zavatra inona izy, miteny tsotra sy tsotra amin'ny kentoty, manana ny tsirony ary tsy mahalala izay lazainy ==> moron izy, manidy ny vavany izy raha tsy fantany fa tsy hitany izany. hadalana Ny iray amin'ireo teny nalaina ankafiziko indrindra momba ny hadalan'olombelona dia avy amin'i Mark Twain - ary iray amin'ireo mpanoratra sy mpandinika ahy indrindra ihany koa: "Aleo mihidy vava ianao ary miseho ho vendrana toy izay manokatra azy ary mamela fisalasalana."
2. Ny fanamarinana Unix 03 dia hype madio hametrahana ny vokatrao amin'ny tontolon'ny asa aman-draharaha ary asehoko anao amin'ny fomba mahery vaika: volana vitsivitsy lasa izay, Apple dia nandefa datacenter mega tany North Carolina, Etazonia. Na dia mivarotra -bah aza i Apple, scam- ho an'ny mpanjifany ny kinova MacOS X ho an'ny mpizara REHETRA MESIN'NY DATACENTER-nao RUN LINUX, raha tsy diso aho HP / AIX.
Raha tena Unix tokoa i MacOS X dia hampiasa ny vokatra mpizara azy manokana. Apple dia mpandainga ary fetsy toa an'i Microsoft ihany koa raha resaka scam, miala tsiny, mivarotra ny vokariny. Averiko ihany: ny fanamarinana UNIX 03 dia fampitandremana fotsiny mba hahafahan'ireo tompon'andraikitra amin'ny faritra IT an'ny orinasa tsirairay hanolotra ny vokatra Apple ho safidy mety satria voamarina ho Unix izy ireo - fa tsy hampiasa F / LOSS ary hitahiry dolara an-tapitrisany.
3. Mavesatra be ny etona, METY (toy izao amin'ny sora-baventy) ary raha misy zavatra miavaka ananan'izy ireo fa matotra izy io, tsy kisendrasendra na kapoka nahazo ny lahatra fa izy ireo no sehatra sosialy fivarotana videogames # 1, raha hoy izy ireo fa manana izany valiny izany izy ireo avy eo, dia tsy handoro ny tenany hiteny zavatra tsy tokony hatao ka avy eo atsipy manodidina ny vozony. Tsy haiko koa ny momba anao fa namaky lahatsoratra maromaro avy amin'ny injenieran'ny Valve sy NVIDIA aho izay nanapotika ny fanatsarana nataon'izy ireo ho an'ny kinova GNU / Linux sy ireo fanamby natolotra azy ireo ary manome toky anao aho fa sady tsy mpandainga no tsy mihatsaravelatsihy. jeneraly mahatsikaiky ary nofatoran'izy ireo ^ _ ^
Tompoko, mila mianatra mamantatra ianao rehefa misy milaza ny marina sy rehefa manary lamba setroka izy 😉
Notsapaiko ny fahombiazan'ny GNU / Linux amin'ny resaka asa isan'andro (na dia ny fanohana ny cache Facebook aza) ary ny milaza ny marina, ny GNU / Linux GUI dia mamaly amin'ny fomba tsara kokoa rehefa mampiasa ireo asa ireo, ankoatry ny Processes do tsy hampitombo ny fihinanany loharano tampoka toy ny ataon'ny Windows sy ny fomba fikirakirana fianjerana dia tsy hisy fiantraikany amin'ny GUI iray manontolo toy ny fanaon'ny Apple Aqua GUI sy Windows Aero / Modern UI.
Ny hevitrao dia noho ny olan'ny famolavolana ny maritrano Windows ankehitriny.
Taorian'ny fanesorana ny NT, ny devs Windows dia nipetraka nanodidina ny latabatra mba hamakafaka izay mety ho tsara indrindra: manasaraka tanteraka ny antontan-taratasim-pifaneraserana amin'ny rafitra - toy ny ao amin'ny rafitra fiasanay- mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana raha toa ka misy ny fampiasana diso ny loharano Windows na, ny mifanohitra amin'izay, ampidiro ao anaty kernel ary mahazoa fampitomboana miavaka.
Tapaka tamin'ny farany fa ny zanadrafitrasa sary dia matotra ampy hahafahana manao azy ho ampahany amin'ny kernel ary izany no mitohy manomboka amin'io fotoana io, izany no antony rehefa misy ny rindranasa na ny hadisoan'ny rafitra fiasa mihatra amin'ny subsystem misy sary ny rafitra iray manontolo. fianjerana amin'ny maodely lahatsoratra malaza BSOD.
Betsaka ny azo ambara sy lazaina manohitra ary manohana ny rindrambaiko tompona orinasa ary indrindra ny Microsoft sy Apple. Microsoft dia nanomboka ho toy ny orinasa miorina amin'ny fahombiazan'ny asan'ny hafa, ohatra, ny MS-DOS be voninahitra dia Q-DOS novaina sy manana patanty ary nisaorana ny mpanoratra tany am-boalohany ary nodaka tamin'ny vody. Hotmail dia orinasa iray azon'ny Microsoft ary izy no manolo ny tsy fahombiazan'ny MSN (ilay sary tsy misy ilana azy miaraka amin'ny Windows 95). Mandra-pahatongan'ny taona 90 tany ho any dia nisy ny fitoriana nataon'i Apple tamin'i Microsoft saingy tamin'ny fahatongavan'i Jobs indray sy fifanarahana vitsivitsy tamin'i Andriamatoa Gates dia natsangana indray ilay marika. Raha ny marina, ny fahombiazan'ny Asa mifandraika amin'ny iPOD dia vokatry ny asa nataon'ny RealNetworks mifandraika amin'ny tsena sy ny indostrian'ny mozika. Araka ny ho tsikaritrareo dia samy naka hevitra i Andriamatoa Gate sy Jobs ary nampihatra azy ireo, nefa mazava ho azy fa tsy manome voninahitra ireo tena mpamokatra ireo vokatra ireo.
Apple natsangan'i Steve's (Jobs and Wozniack [tsy tadidiko ny fomba fanoratana azy]) ny iray dia ny fahaizan'ny elektronika ary ny iray amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe, ary ireto farany Jobs dia nitantana azy ireo toy ny tsy misy olona eto amin'ity tontolo ity.
Ankehitriny, raha mamakafaka ny antony hanohizan'ny Microsoft ny asany ary ankehitriny Apple, dia satria ny ankamaroan'ny olona tsy miraharaha ny fisian'ny safidy hafa afaka mifaninana amin'ny kalitao sy ny vidiny ary raha mbola mitohy izany dia ho kely ny fiovana ary ireo marika handresy nefa tsy hanadino ihany koa fa, raha ny herin'ny toekarena ananan'izy ireo, ny orinasa kely izay miatrika azy ireo dia matetika no vidiana avy eo nanjavona. Ohatra, vao tsy ela akory izay ny Skype dia azon'i Microsoft, Java, Virtualbox ary mySQL azon'i Oracle, izany dia mitanisa ohatra vitsivitsy fotsiny.
Betsaka no nanolotra an'i Apple ho an'ny maty ary ny sasany kosa naminany ny faran'ny Microsoft, ny marina dia mbola mitohy ny tsy fahalalàn'ny mpisolo toerana dia mbola hanohy ilay drafitra iray ihany isika momba ny hoe ity na ity ary amin'ny faran'ny andro dia hitohy ihany ve ny raharaha.
Eto dia mety hisy hanontany hoe, inona no anjara birikin'ny paoma sy microsoft tamin'ny indostrian'ny rindrambaiko izay nisy fiatraikany?
TPT! Moa ve ianao tsy mahalala ny kinova amin'ny fikandrana tsy misy fiambenana?
Tsy manisa fa tsy ara-dalàna izany, ny teny dia tsy ampy hamaritana ny antony tsy tokony hanomezana torolàlana ny fampiasana ireo kinova Windows tsy raharahaina.
Raha toa ny mpampiasa Windows dia angatahina hisoroka ny karazana triatra sy activator mba tsy hamoritana ny masinin'izy ireo, miaraka amin'ny Windows tsy misy mpiambina izay alaina avy amin'ireo tranonkala manantona gigabytes aorian'ny gigabytes freeware sy shareware, tsy fantatray hoe avy aiza izy ireo, satria firy ny tanana nandalo, na iza no nampivoarana azy ireo, ary ankoatry ny fanohizana ny fanidiana azy sy ny tsy fisian'ny fanavaozam-baovao, ny tranga dia tsy ny hoe malware dia mandeha amin'ny rafitra, fa ny rafitra kosa dia mandeha amin'ny malware (na iray) izay ho an'ny maro hafa dia tsy azo atao ny manala azy ary izay kosa dia lakana mihodina tsy misy avaratra na atsimo eo afovoan'ny ranomasimbe misy botnets sy marefo izay mipetraka amin'ny Internet.
Ny ankamaroan'ny freeware izay ao amin'ny Windows dia matetika no ilaina, saingy indrisy, fitaovana toa ny nLite, raha tsy tantinao tsara io fitaovana io dia mety hahatonga ny Windows ho malemy kokoa noho izy io amin'ny alàlan'ny default.
Misafotofoto… = /
Kely lol. Antony iray ihany, iray hafa ohatra: https://blog.desdelinux.net/la-pirateria-como-modo-de-vida/ Manimba ny Linux mihoatra ny Windows ny piraty, ary na dia mametraka ny paranoias aza, ny malware dia orinasa manankarena be ho an'ireo izay manao azy ary manimba be ny rehetra amin'ny Internet, ka tsy tsara ny manaparitaka rindrambaiko piraty.
Tsy ny fampiroboroboana ny piraty izany. Raha ny amiko dia natao ho fizahana andrana, fanamboarana sns ... (maninona no mandoa fahazoan-dàlana ho an'ny zavatra iray izay hampiasaiko mandritra ny roa herinandro ary avy eo manary azy?).
Ny hevitro manetry tena.
Ho an'izay fitsapana ankehitriny izay fanombanana mandritra ny 30 andro dia mandeha tsara, ary raha te hanandrana bebe kokoa ianao dia nilaza ilay microsoft iray ihany fa afaka mampiasa ilay baiko ianao slmgr -mba hery (ao amin'ny terminal ho mpitantana ao amin'ny Windows 7) mba hizahanao fitsapana 30 andro indray rehefa manomboka indray ianao, saingy ity baiko ity dia tsy azo ampiasaina afa-tsy intelo hanalavana ny fotoam-pitsarana, ka izany dia efa 120 andro (4 volana) ) an'ny Windows ara-dalàna.
HTML5ify, ampiasao ny mpilalao HTML5 hilalao horonantsary ao amin'ny Chrome